Abaculi bephelele (kusuka phezulu, kwesobunxele) yi-Neil Gonsalves Trio +2, uZoe The Seed, (ngezansi) yiN’den (uThuli Zama no-David Smith).
Umfundisi we-jazz uMnu Neil Gonsalves nomculi nomfundi wakudala wase-UKZN uZoe The Seed, nabaculi ababili oN’den bahlangane ne-Concerts SA ochungechungeni oluthathu lomculo obukhoma e-Centre for Jazz and Popular Music yase-UKZN ukuvuselela amakhonsathi athandwayo ase-Centre.
Umculo uyoba mhla we-3, we-10 nowe-17 kuLwezi.
Loluchungechunge lomculo, olubizwa nge-Words & Music, luzogaba ngezingoma ezintsha nezindala kanjalo nezingasoze zabuna ezenziwe kabusha ukuhambisana nesikhathi esiphila kusona. Abaculi yilabo abawine imiklomelo ye-Concerts SA digital mobility fund.
Mhla we-10 kuLwezi uZoe The Seed, odume ngomdlandla wakhe nephimbo elinamandla, uzohlangana ne‘cilongo elifundisiwe’ likaMnu Thabo Sikhakhane beyi-+2 ibhendi yabathathu yomshayipiyano uGonsalves. Kulebhendi kukhona umshayizigubhu uMnu Riley Giandhari nomdlali we-bass uMnu Talent Mbatha.
Amakhonsathi aqoshiwe azodayisa enkundleni yamathikithi i-www.nationalartsfestival.co.za.
UZoe The Seed useneminyaka eyisithupha ehola ibhendi yakhe, edlala ezindaweni ezihlukene nakumafestiveli ezweni lonke. ‘Ngiqhakambisa amagxathu abantu besifazane abangabaholi abalethe ushintsho hhayi ngomlomo kuphela kepha futhi nangezenzo zabo. Ngibahlonipha kakhulu abantu besifazane abondle imiphefumulo yethu ngomculo omtoti; abantu besifazane abanjengo-Dorothy Masuka, uLetta Mbuli, uMama Africa noSibongile Khumalo. Siphethe wonke amagama nayo yonke imisindo kanti kuzobonakala ekhonsathini lethu,’ kusho yena.
UZoe The Seed uzocula noThabo Sikhakhane wecilongo, uSiyalo Zulu we-trombone, uZibusiso Makhathini we-keyboard, uDalisu Ndlazi we-bass guitar noSbu Zondi wezigubhu.
U-Gonsalves usebenzisa iqhinga labangaphezu kwabaculi abathathu, elingenisa abanye abaculi uma kudingeka. UZoe noThabo bavame ukucula kwithriyo kanti ibhendi yagcina ukucula ndawonye ngaphambi kwe-COVID 19. Ngakho ikhonsathi lizodla ngomculo omnandi odansisayo nonamagama akhuluma ngezinto ezithinta umphakathi.
Uchungechunge luzovala ngeqembu lababili iN’den, iholwa nguThulile Zama osebenza e-UKZN, nowaziwa kwi-Heels over Head, nomshayipiyano owayefunda e-UKZN uMnu David Smith.
Amathikithi abiza iR100 kanti ayadayisa e-Centre for Jazz and Popular Music ophikweni oluse-Howard College. (noma ku-zamat1@ukzn.ac.za)
Kuyovulwa li-17h30 kanti wonke amakhonsathi aqala nge-18h00.
Izithombe: wuSimanga Zondo no-Val Adamson